Business English - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on October 21, 2015 at 10:09 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ရုံးမလာနိုင်ကြောင်း ခွင့်စာနမူနာများ (Posted on 18 May 2015) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/excuse-letters
ရုံးတွင် မရှိကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားစာများ (Posted on 14 May 2015) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/out-of-office-message
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးအင်္ဂလိပ်စာ ရေးသားခြင်း - ရွှေရောင်စံနှုန်းစံထားများ (Posted on6May 2015) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/business-english-writing
အလုပ်ထွက်စာကို မည်ကဲ့သို့ရေးရမည်နည်း (Posted on 27 April 2015) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/resignation-letters
စီးပွားရေးဆိုင်ရာ Email Message ရေးနည်း ၇ မျိုး နှင့်အမှားများသောစကားလုံး ၁၀ လုံး (Posted on 15 July 2014) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/email-message
လုပ်ငန်းခွင်သုံး အင်္ဂလိပ်စာရေးသူများအတွက် အကောင်းဆုံး တည်းဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အကြံပြုချက် (၁၀)ချက် (Posted on 17 October 2013) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/3423487:Topic:973222
စီးပွားရေးအင်္ဂလိပ်စာဝေါဟာရများ (Marketing) (Posted on 18 June 2013) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/marketing
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာအရေးအသားပိုမိုကောင်းစေရန် အကြံပြုချက် (၁၀)ချက် (Posted on 17 May 2013) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/10tips
လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများနှင့် တာဝန်များ (ဝေါဟာရ သင်ခန်းစာ) (Posted on 25 April 2013) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/rights-and-responsibili...
တာဝန်များ နှင့် အလုပ်အတွက် လိုအပ်သည့် အရည်အချင်းများ အကြောင်း ပြောဆိုခြင်း (Posted on9January 2013) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/3423487:Topic:780212
ဈေးကွက်များ နှင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုအကြောင်း ပြောဆိုခြင်း (Talking abour markets and competition) (Posted on9January 2013) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/talking-abour-markets-a...
မိမိကုမ္ပဏီအကြောင်းပြောခြင်း (Posted on7December 2012) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/3423487:Topic:765722
အလုပ်အကိုင်ရရှိစေမည့်အခွင့်အလမ်းများကိုဆုံးရှုံးစေမည့် အင်္ဂလိပ်စာအမှားများ (Posted on 21 September 2012) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/3423487:Topic:712779
လက်တွေ့အသုံးချအင်္ဂလိပ်စာ - သင်၏အလုပ်အကိုင်သစ်အတွက် အသုံးကျမည့်နည်းလမ်းများ (Posted on 26 July 2012) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/tips-for-your-new-job
အီးမေးလ်ရေးနည်း အကြံပြုချက်များ (Posted on6July 20120 - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/tips-on-writing-emails
Writing Emails - A formal message (အီးမေး(လ)ရေးနည်းအထွေထွေ - ရုံးသုံးအကြောင်းကြားစာ) (Posted on2July 2012) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/writing-emails-a-formal...
Writing Emails - A First Contact (အီးမေး(လ)ရေးနည်းအထွေထွေ - ပထမအကြိမ်ဆက်သွယ်ခြင်း) (Posted on 27 June 2012) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/writing-emails-a-first-...
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှင့် အလုပ်အကိုင် တိုးတက်မှု (Posted on 1 May 2012) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/english-language-and-ca...
အချက်အချာကျသောစကားလုံးများ Key Phrase with formal and informal (Posted on 13 January 2012) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/key-phrase-with-formal-...
How to write Cover Letter (Posted on3January 2012) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/how-to-write-cover-letter
How to write business Letter (Posted on 24 December 2011) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/how-to-write-business-l...
formal or Informal? (Posted on 15 December 2011) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/formal-or-informal
စာဟန်ပေဟန်နဲ့လား၊ စကားပြောဟန်နဲ့လား (Informal or what? by Guy Perring) (Posted on 13 December 2011) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/informal-or-what
Making an Appointment (ကြိုတင်ချိန်းဆိုခြင်း) (Posted on 18 November 2011) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/making-an-appointment
အစည်းအဝေးတွင်ပါဝင်တက်ရောက်ခြင်း (Participating inaMeeting) - အပိုင်း (၃) (Posted on 25 October 2011) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/participating-in-a-meet...
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အခြေအနေများနှင့် ဆီလျော်သော ဘာသာစကား (Appropriate Language in Business Situations) - အပိုင်း (၃) (Posted on 24 October 2011) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/appropriate-language-in...
မေးခွန်းမေးခြင်း (Questions, questions? by Guy Perring) (Posted on3October 2011) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/questions-questions
အစည်းအဝေးကို ဦးဆောင်ကျင်းပရန် အင်္ဂလိပ်စကား အသုံးအနှုန်းများ (Posted on 28 September 2011) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/3423487:Topic:424115
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ (Tick Off Those Minutes by Guy Perring) (Posted on 20 July 2011) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/tick-off-those-minutes
ရှင်းလင်းသည်ထက် ရှင်းလင်းစေဖို့ (Clarity and More Clarity by Guy Perring) (Posted on 23 June 2011) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/clarity-and-more-clarit...
ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတဲ့စကားအသုံးအနှုန်း (Language to Use for Negotiating by Guy Perring) (Posted on9June 2011) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/language-to-use-for
Taking the visitor to their hotel or company (အလည်ရောက်လာသော ဧည့်သည်အား ဟိုတယ် သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီသို့ ခေါ်ဆောင်သွားခြင်း) (Posted on2May 2011) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/taking-the-visitor-to-t...
Talking about plans and schedules (အစီအစဉ်/လုပ်ငန်းစဉ်များ အကြောင်း ပြောဆိုခြင်း။) (Posted on 27 April 2011) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/talking-about-plans-and
လက်တွေ့အသုံးချ ရုံးသုံးအင်္ဂလိပ်စာ (ကမ်းလှမ်းချက်အား ငြင်းဆိုရာ/လက်ခံရာ၌ အသုံးပြုနိုင်သော စကားစုများ) (Posted on 21 March 2011) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/3423487:Topic:151333
Making Introductions and Responding to Introductions (Posted on 21 March 2011) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/making-introductions-and
ဘယ်အချိန်တွေ့ကြမလဲ။ (Could We FixaTime to Meet? by Guy Perring) (Posted on3March 2011) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/could-we-fix-a-time-to-...
ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ခန်းစာ (Posted on 25 January 2011) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/3423487:Topic:123057
တစ်ကမ္ဘာလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် အင်္ဂလိပ်လိုပြောနေကြပြီ
တစ်ကမ္ဘာလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် အင်္ဂလိပ်လိုပြောနေကြပြီ (အပိုင်း ၁) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/global-business-speaks-...
တစ်ကမ္ဘာလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် အင်္ဂလိပ်လိုပြောနေကြပြီ (အပိုင်း ၂) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/global-business-speaks-...
တစ်ကမ္ဘာလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် အင်္ဂလိပ်လိုပြောနေကြပြီ (အပိုင်း ၃) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/global-business-speaks-...
တစ်ကမ္ဘာလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် အင်္ဂလိပ်လိုပြောနေကြပြီ (အပိုင်း ၄) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/global-business-speaks-...
ရုံးတွင်းအင်္ဂလိပ်စကား (၁) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/3423487:Topic:984723
ရုံးတွင်းအင်္ဂလိပ်စကား (၂) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/3423487:Topic:990676
ရုံးတွင်းအင်္ဂလိပ်စကား (၃) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/3423487:Topic:996745
ရုံးတွင်းအင်္ဂလိပ်စကား (၄) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/3423487:Topic:1003221
ရုံးတွင်းအင်္ဂလိပ်စကား (၅) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/3423487:Topic:1008802
ရုံးတွင်းအင်္ဂလိပ်စကား (၆) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/3423487:Topic:1015967
ရုံးတွင်းအင်္ဂလိပ်စကား (၇) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/3423487:Topic:1023040
အသုံးများသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးအင်္ဂလိပ် အီဒီယံများ
အသုံးများသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးအင်္ဂလိပ် အီဒီယံများ (၁) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/3423487:Topic:895485
အသုံးများသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးအင်္ဂလိပ် အီဒီယံများ (၂) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/3423487:Topic:903849
အသုံးများသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးအင်္ဂလိပ် အီဒီယံများ (၃) (Business English Lesson) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/business-english-lesson
အသုံးများသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးအင်္ဂလိပ် အီဒီယံများ (၄) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/4-1
အင်္ဂလိပ်စာ ရေးနည်းအဖြာဖြာ အပိုင်း-၁ (Cover Letter) (Posted on 29 December 2012) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/cover-letter-1
အင်္ဂလိပ်စာရေးနည်းအဖြာဖြာ အပိုင်း-၂ (CV/ British style) (Posted on2January 2012) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/cv-british-style
အင်္ဂလိပ်စာရေးနည်းအဖြာဖြာ အပိုင်း-၃ (Resume/ American style) (Posted on2January 2013) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/resume-american-style
အင်္ဂလိပ်စာရေးနည်းအဖြာဖြာ အပိုင်း-၄ (Business email) (Posted on7January 2013) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/business-email
အင်္ဂလိပ်စာရေးနည်းအဖြာဖြာ အပိုင်း-၅ (Academic email) (Posted on7January 2013) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/academic-email
အင်္ဂလိပ်စာရေးနည်းအဖြာဖြာ အပိုင်း-၆ (Business email & Academic email/ American style) (Posted on7January 2013) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/business-email-academic...
အစည်းအဝေးတွင်ပါဝင်တက်ရောက်ခြင်း (Participating inaMeeting) - အပိုင်း (၁) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/participating-in-a-meeting
အစည်းအဝေးတွင်ပါဝင်တက်ရောက်ခြင်း (Participating inaMeeting) - အပိုင်း (၂) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/participating-in-a-meet...
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အခြေအနေများနှင့် ဆီလျော်သော ဘာသာစကား
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အခြေအနေများနှင့် ဆီလျော်သော ဘာသာစကား - အပိုင်း (၁) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/appropriate-language-in...
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အခြေအနေများနှင့် ဆီလျော်သော ဘာသာစကား (Appropriate Language in Business Situations) - အပိုင်း (၂) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/appropriate-language-in...
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစည်းအဝေးဆိုင်ရာ အဓိကကျသော စကားစုများ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစည်းအဝေးဆိုင်ရာ အဓိကကျသော စကားစုများ - အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း (အပိုင်း ၁) (Posted on 31 August 2011) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/key-business-meeting-ph...
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစည်းအဝေးဆိုင်ရာ အဓိကကျသော စကားစုများ - အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း (အပိုင်း ၂) (Posted on2September 2011) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/3423487:Topic:379934
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစည်းအဝေးဆိုင်ရာ အဓိကကျသော စကားစုများ - အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း (အပိုင်း ၃) (Posted on 8 September 2011) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/3423487:Topic:391243
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစည်းအဝေးဆိုင်ရာ အဓိကကျသော စကားစုများ - အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း (အပိုင်း ၄) (Posted on 16 September 2011) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/key-business-meeting-ph...
လက်တွေ့အသုံးချ ရုံးသုံးအင်္ဂလိပ်စာ (အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာမှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ စကားစုများ) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/3423487:Topic:125467
လက်တွေ့အသုံးချ ရုံးသုံးအင်္ဂလိပ်စာ (အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာမှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ စကားစုများ - အပိုင်း ၂) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/3423487:Topic:138939